…………. सहिद आखिर के पाएउ त ? ::KhojOnline.com
- विश्वाश राज कुँवर
सहिदको जवाफ –
मेरो परिवार ले पिडा , मेरो नेता ले पेडा ।
मेरो परिवार ले दु:ख , मेरो नेता ले सुख ।
मेरो परिवार लाई न सारी न धोती ,
मेरो नेता को गनिनसक्नु सम्पत्ति ।
मेरो परिवार लाई थाहा भएन औषधी र उपचार् ,
मेरो नेता हाछीउ अौउदा बिदेश तिर सवार ।
मेरो परिवार लाई आकाश छानो धर्ती ओछ्यान ,
मेरो नेता लाई महल कुर्सी बाँकी आँफै जान ।
मेरो परिवार आज टर्यो एक छाक के खाउ पर्सी ,
मेरो नेता आज वाइन 🍷 खाउ भोली चामल मार्सी ।
मेरो ज्यान लाई हरियो बास ,
मेरो नेता लाई हेलिकप्टर 🚁 को आश.
मेरो ज्यान ले पायो कि पाएन घाट ,
मेरो नेताले अवस्य पाए सुन्को खाट ।
म देश को लागि मरे भनेको त पार्टी को लागि मरेछु .
नेपाल आमा मलाई माफ गरी देउ
बेकारै यि नेताको लागि अमूल्य ज्यान फालेछु ।।
बिहि, माघ १७, २०७५ मा प्रकाशित